के हो फूलपाती ? कसरी भित्र्याउँदा शुभ लाभ – Bishal4You
के हो फूलपाती ? कसरी भित्र्याउँदा शुभ लाभ
Bishal4You १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:५३
बडादशैको सातौ दिनलाई फूलपाती भनिन्छ । घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैँ घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रुपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष लाई फूलपातीको रुपमा भित्राउने गरिन्छ । बिद्धानहरुका अनुसार ‘सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभा, अनारको डाँठ, अदुवाको बोट, कच्चु, उखु, केरा आदि नौ प्रकारका पल्लवहरू दशैँघरमा लग्ने कार्यलाई फूलपाती भित्र्याउने भनिन्छ’ ।
बेसार– हाम्रो दैनिक प्रयोगमा बेसारको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। संस्कृतमा हरिद्रा भनिने बेसारविनाको दाल, तरकारी र अचार रङ्गहीन एवं स्वादहीन हुन्छ। यसको प्रयोग औषधोपचारमा समेत गरिन्छ। आँखा दुख्ने, छालाका रोग लगायतका घाउ चोट पटकमा यसको गानोको रसको प्रयोग गरिन्छ। गाउँघरमा रूघाखोकी लाग्दा बेसार पानी पकाएर औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको औषधीयुक्त गुणले गर्दा भारतले विभिन्न औषधीहरूमा यसको प्रयोग गर्ने गरेको छ। क्यान्सरको उपचारमा समेत यसको प्रयोग गर्न सकिने वैज्ञानिक खोजले बताएका छन्। त्यसैले हरिद्राको पत्रले स्नान गराउँदा यस्तो मन्त्रको प्रयोग हुन्छ– ‘हरिद्रे वरदे देवि उमारूपासि सुव्रते्मम विघ्नविनाशाय पूजां गृह्ण सुरोत्तमे।’
मानक– ‘यस्य पत्रे वसेद्देवी मानवृक्ष शचिप्रिय, मम चानुग्रहार्थाय पूजां गृह्ण यथासुखम्।’ मानक अर्थात् कर्कलोलाई कन्दमूलको वर्गमा लिइन्छ। कर्कलोको गानो (पिँडालु) लगायतका कन्दमूल हाम्रा चाडपर्वमा प्रयोग भइरहन्छन्। एकादशी व्रत र ऋषिपञ्चमी जस्ता व्रतका लागि कर्कलो र पिँढालु फलाहार मानिन्छन्। नेपालको कतिपय अन्न कम्ती हुने भू–भागमा मानिसहरूले यस प्रकारका कन्दमूललाई खाद्यवस्तुको रूपमै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कर्कलोमा एक प्रकारको कोक्याउने अथवा चिलाउने रासायनिक तत्वहरू हुन्छन्। कर्कलोलाई पनि औषधीय वस्तुको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। रक्तशोधन एवं पित्तशोधन आदि उपचारको लागि कर्कलोको प्रयोग लाभदायक मानिन्छ।
बेल– ‘महादेवप्रियकरो वासुदेवप्रियः सदा उमाप्रीतिकरो नित्यं बिल्ववृक्ष नमोऽस्तुते।’ श्लोकमा भनिएजस्तै भगवान् शिवजीको प्रियवस्तुको रूपमा बेललाई लिइन्छ। यसको महत्त्व आयुर्वेदिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिले पनि उत्तिकै छ। नेवारी समुदायमा कन्या केटीहरूको विवाह बेलसँग गराइदिने परम्परा छ। तराई र पहाडी भागमा पाइने यसको रूखले वातावरणलाई स्वच्छ बनाउनुका साथै फल र पातले औषधीको रूपमा महत्त्व बोकेका छन्। पखाला, आउँ आदि रोगको साथै वीर्यवर्धक औषधीको कार्य बेलले गर्दछ। बेलको फलको गुदी वा चूर्णलाई औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। बेलको फलबाट सर्वत बनाएर पिउनाले मस्तिष्कलाई ठण्डा बनाउनुको साथै शरीरमा स्फूर्ति ल्याउँछ।
अशोक– पहाडदेखि तराईसम्म पाइने यो सधैँ हरियो रहिरहने रूख हो। गाढा रातो फूल फुल्ने र सुगान्धित हुने अशोकमा सिमीजस्ता लामा फल फल्दछन्, जसभित्र बीज हुन्छन्। अशोकको प्रयोग औषधीको रूपमा बोक्रा फूल आदिलाई लिइन्छ। स्त्रीको गर्भाशयको कमजोरी, प्रदर, रक्तविकार आदिमा बोक्राको पाक बनाएर पिउनाले वा फूलको चूर्ण पानीसँग पिउनाले फाइदा पुग्दछ। शरीरका विभिन्न भागमा वेदना भएमा वा पोलेमा फूल वा बोक्राको लेप लगाउँदा आराम हुन्छ। यिनै गुणहरूका कारण भगवतीलाई अशोकपत्र चढाउँदा यस्तो वचन उच्चारण गरिन्छ– ‘हरप्रीतिकरो वृक्ष त्वमेकः शोकनाशनः्दुर्गाप्रीतिकरो यस्तात्तस्मात्वं रक्ष मां सदा।’ जयन्ती– ‘निशुम्भशुम्भमथने सैन्द्रैर्देवगणैः सह, जयन्ति पूजयामि त्वामस्माकं वरदा भव।’
यो बर्ष हनुमानढोकामा ३ बजे फूलपाती भित्राइँदै